သင်စိတ်ပျက်နှင့်အတူမရှိခြင်း၏အရည်အသွေးကောင်းလိင်ဂိမ်းများထွက်ရှိစျေးကွက်အပေါ်အခုအချိန်မှာ? နှင့်၊ဒုတိယ၊အဆိုပါအချက်ကိုကြောင်းဒါကြောင့်ထိုသူတို့၏အနည်းငယ်အမှန်တကယ်မဆိုအကောင်းမှကြွလာသောအခါ၏ခေါင်းစဉ်သင်ျပျော်စရာ? ကောင်းစွာအလွန်ကြီးစွာသောသတင်းအကြောင်းညီအစ်ကိုညီအစ်မလိင်ဂိမ်းများဒီမှာအဟုတ်ကိုသင်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုအဖောင်းအပြည့်အဝမြှုပ်နှံဖို့အဆှတူးဖော်ဆက်ဆံရေးနှင့်ပျော်စရာအကြားညီအစ်ကို။, ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးနောက်ကျောတွင်သြဂုတ်လ ၂၀၁၈ နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကနေခွန်အားအစွမ်းသတ္တိကိုအစဉ်အဆက်ကတည်းက၊အကြောင်းနားလည်မှုအအာရုံစူးစိုက်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းကြီးဖြစ်သွားမယ်အားလုံးသေချာအောင်အကြောင်းကြောင်းအဆိုပါဂိမ်းကစားကိုဒီနေရာမှာပေးအပ်အတိအကျအဘယ်အရာကိုသူတို့လိုချင်တဲ့အရေးနှင့်လျော့နည်းဘာမှမ! ခါတွန်းအားပေးတွန်းထိုးဖို့လာ၊အခြားအစက်အပြောက်အဆိုပါဝက်ဘ်လောက်မှာရိုးရိုးနားမလည်ကြဘူးကောင်းသောမောင်နှမသံုးေနှင့်မည်သို့သေချာစေရန်တစ်စုံတစ်ဦးကိုအလွန်ခြေပတ်လည်ဖြစ်သွားနိုင်ပည္ဆိုင္ရာနောက်တဖန်မကျော်နှင့်။, ကျနော်တို့ရရှိပါသည်တစ်လက်ကိုင်အပေါ်မှာအခြေအနေသော်လည်း၊ဒါကြောင့်သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်လာသောအခါသင်သည်အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စသင်ရတော့မှာအမှန်သဘောတူတိုတောင်းသောအချည်းတယ္။ ကစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေနှင့်အတူမှာကျွန်တော်တို့ကိုညီအစ်ကိုညီအစ်မလိင်ဂိမ်းများ? သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးနှင့်ယခုရပျော်စရာအပေါ်! နောက်တစ်နည်း၊အနည်းငယ်ယူရာက္ၾအောက်တွင်ချအသေးစိတ်အပေါ်အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအပူဆုံးအချာပတ်ပတ်လည်များအတွက်ဂိမ်းအတွက်ဒီနေရာ။
ဒါကြောင့်ညီအစ်ကိုညီအစ်မလိင်ဂိမ်းများသည်လုံးဝ-ပုံစံခရီးသွားမယ့်သင်အကြောင်းကျွန်မတို့ဟာအမှန်တကယ်အတော်လေးစိတ်အားထက်သန်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်အမြင်အကျိုးတူ–ကျနော်တို့နေရတဲ့အဖြစ်အများအပြားဂိမ်းကစားခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အရေးယူတတ်နိုင်သမျှအအေး၊အဓိပ္ပါယ်များပြသနိုင်ဖို့တတ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းကြောင်းလူတိုင်းအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လုပ်ပါအဆင့်အရာတွေ။ ငါကလည်းင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာမတိုင်ခင်ကညီအစ်ကိုညီအစ်မလိင်ဂိမ်းများသည်အပူဆုံးခရီးအပေါ်များအတွက်အင်တာနက်မည်သူမဆိုရဲ့အပေါ်စိတ်အားထက်သန်ဤအမျိုးအစားပစ္စည်းနှင့်ငါထင်၏ရည်းစားသင်ျတာ့ဝေလငါး၏အချိန်။, မှတ်ချက်ဒါကကျနော်တို့အထူးသဖြင့်ကြည့်ရှုမှာလိင်အကြားအငယ်ညီအစ်ကို၊–အားသာချက်များရှိပါတယ်နေစဉ်မိဘများမှပါဝင်ပတ်သက်ရယူခြင်း၊မဟုတ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကျနော်တို့စိုးရိမ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိနှင့်အတူ! အရာက္ဇာမော်ဒယ်သည်ဟုဆိုလိုသည်နှင့်အတူမည်သူမဆို Chrome၊မြေခွေးမှာသို့မဟုတ်ဆာဖာရီဖြစ်သွားနိုင်ကစားရန်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်အတည်းပြဿနာ။ ဒီစကိုဆိုလိုကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများအပေါ်နှင့် MacOS သွားနိုင်ကစားရန်သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးမှရတယ်။ ဒါကတော်တော်ချိုမြိန်၊မှန်သော? ထောက်ခံမှုများအတွက်ဂိမ်းကစားခြင်းကမ္ဘာပေါ်တွင်အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့စက်ကိရိယာပေါ်မှာဆိုရင်!, အိုး၊အရာက္ဇာထာစသောမလိုအပ်ရှိပါတယ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ဘာမှမရှိသည်:သင်ကကစားနိုင်ပါတယ်၊ဖြောင့်ကွယ်ပျောက်၏၊စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲ။
အကြီးမားဆုံး၏ညီအစ်ကိုညီအစ်မလိင်ဂိမ်းများရှိပါတယ်ယ့်ကိုသခ်ာေ၎င်း၏အောင်မြင်ကျော်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အဖြစ်ကျွန်တော်ယူမှာငါတို့အာရုံစူးစိုက်ဂရပ်ဖစ်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အလေးအနက်။ ကျွန်တော်သိရှိကွောငျးအများအပြားဂိမ်းကစားခရီးထွက်ရှိပါတယ်တကယ်စို့မှကြွလာသောအခါအမြင်အာရုံအရည်အသွေး၊သင်ဖို့ရှိသည်သွားဖို့ဆွဲဆောင်လူမဟုတ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးစီမံကိန်းကြည့်ရှုမယ့်မကောင်းတဲ့။, ညီအစ်ကိုညီအစ်မလိင်ဂိမ်းများအကြောင်းကိုအားလုံးပေးခြင်းသင်အလွန်ကြီးစွာသောအတွေ့အကြုံအတွက်ဂိမ်းအဖြစ်ဂရပ်ဖစ်ဌာနဖြစ်သည်၊ဒါပေမယ့်ငါဝန်ခံရန်ရှိသည်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေအရောင်းအစေးသည်အဆိုပါဂိမ်းအတွင်းထက်ပိုကြည့်ကောင်းဘာမှမသင်ဖွယ်ရှိအနှံ့လာ။ နောက်ကွယ်မှအဖွဲ့တင်ဆက်အင်ဂျင်နှင့်ပါဝင်ပတ်သက်သူအတူ ၃D ကာတွန်းအမှန်တကယ်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယကိုသိ:သဘာဝကိုထုတ်လုပ်ဤ sisterly သံုးေ simulators ကိုယ့်ကြောင့်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူ! အိုး၊နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ကြဘူးဆိုရင်မပေါ်တဲ့စူပါခေတ်သစ်ကွန်ပျူတာ:သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်လက်တွေ့ကျကျသုညကိစ္စများကိုပျော်မွေ့အဘယ်သို့ညီအစ်ကိုညီအစ်မလိင်ဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်ဖို့ရှိပါတယ်။, ဤသည်အလွန်ကြီး၏အနာဂတ်ကားဂိမ္းအဖြစ်ဝေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်!
ပြီလို့ပြောလုံလောက်တော့သောသင်တို့၌စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ညီအစ်ကိုညီအစ်မလိင်ဂိမ်းများသည်အကောင်းဆုံးအစက်အပြောက်အင်တာနက်ပေါ်မှာအများအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစား? ကျွန်မသေချာဒါကြောင့်မျှော်လင့်သောကြောင့်၊ငါသည်ယုံကြည်သောအဘယ်သူမျှမကအခြားစီမံကိန်းမှထွက်ရှိအင်တာနက်အပေါ်အခုအချိန်မှာအနိုင်ပေးနှင့်အတူအပျော်အပါးကျနော်တို့ရရှိပါသည်။ ဒါကကိုယ့်အမှု၏အချက်ကိုကျွန်မဟာစိတ်အားထက်သန်အဖြစ်ပဲသင်ပြမှကျွန်တော်တကယ်မသိကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာတွေမှကြွလာသောအခါအလွန်ကြီးစွာသောသင်ျသံုးေကြားညီအစ်ကို။ ဒါကြောင့်ကိုကိုက်အကျည်ဆန်ဖန်တီး၊အခမဲ့အကောင့်ယနေ့နှင့်ကြကုန်အံ့ရဲ့လေ့လာစူးစမ်းအပြည့်မော်ကွန်းတိုက်–ခင်ဗျားချစ်သွား!
သတိရ;အကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးမှာသင်ျအရေးယူ၊တဦးတည်းနှင့်သာဝက်ဘ်ဆိုက်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်ညီအစ်ကိုညီအစ်မလိင်ဂိမ်းများ။ ကျနော်တို့ဒီနေရာမှာပါလိမ့်မယ်မြဲမြဲထမ်းဆောင်၊အကောင်းဆုံး wanking ပစ္စည်းများစွာလူသိများမည်သည့်အကြော punter ဖို့လိုလားကြောင်းမိမိတို့လက်ရရန်တစ်ကြယ်အစုအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းဖြန့်ချိ!